AKW --KWỌ - teringgụ echiche nke nwoke na nwanyị
E tinyela mmemme Safelọ Nche na ụlọ akwụkwọ dị na Australia na-akụzi echiche ụmụ nwanyị LGBT maka ụmụ nwoke n'oge oge njirimara nwoke na nwanyị na-emepe emepe na mgbe ha nwere ike inwe ọgba aghara mmekọahụ. Australia mechara hụ ka ntiwapụ na ọnụ ọgụgụ ụmụaka ebugara n'ụlọ ọgwụ ụmụ nwoke. CAUSE website nwere ọtụtụ ọrụ ọkachamara na transgenderism, Gender Dysphoria, Conversion Therapy, Mmekọahụ mgbanwe na Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo, site n'aka ndị ọkachamara dịka Prọfesọ John Whitehall, Prọfesọ Dianna Kenny na ọtụtụ ndị ọzọ.
Schoolslọ akwụkwọ nchekwa.
Ebumnuche gbasara nwoke na nwanyị n’ụlọ akwụkwọ.
Akwụkwọ Ọkachamara na Transgenderism.
Ndị dibịa ahụike kọwapụtara ihe dị adị nke Transgenderism.
Okanmuta John Whitehall dere na Quadrant Magazine gbasara Gender Dysphoria.
Ndị na-egbochi Hormone na ihe niile Transgender.
Ndụmọdụ & ọgwụgwọ na-arụ ọrụ.
Abụọ na ndị nwanyị nwanyị nwere nwanyị nwanyị ọ bụla, onye bụbu nwanyị nwere mmasị nwanyị na onye na - ekwu okwu ịhapụ ịhapụ ndụ gara aga ndị LGBT. Ndị ọzọ na-esote 13 kọọ akụkọ ha edere banyere otú ndụmọdụ si nyere ha aka.
Walt Heyer biri dị ka nwanyị Laura ruo afọ 10 tupu ikpofu ya wee kweta na mmadụ enweghị ike ịgbanwe mmekọahụ ha.
Mkpa Findchọta Ndị Ndụmọdụ.
Chọta ha ebe a.
Lọ Akwụkwọ Nchebe Gender Ideology.
Studentsmụ akwụkwọ nọ na Class Roll na-akpọ Omume LGBT
Ndi otu ndi mmadu nyere nkwado nke ndi nkuzi banyere ulo akwukwo banyere umuaka nke ndi mmadu bu ndi kwesiri nkwanye ugwu n'ihi na ebubere ya iji gbochie nsogbu nke mmegbu.
Ihe ọ ghọworo kama ịhapụ ókèala gafere oke etu esi akwụ ụgwọ ya. Anyị na-agbakọ ọnụ ma na-akwado gọọmentị gọọmentị na-ahụ maka iwepu ego na nkwado maka mmemme a n'ụdị ya ugbu a.
Ebumnuche nke njikọta nke Schoolslọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Safelọ Akwụkwọ na-elekwasị anya na-eto eto na ụmụaka na -adịghị ike ma na-achọ ikewapụ ha site na isi ezinụlọ ha na ụkpụrụ nke obodo iji kwado ụmụ amaala niile. Anyị na-arịọ gị ka ị tụgharịa uche na mmemme a wee banye n'usoro ihe omume ka mma iji gbochie nsonye na nnabata B basedGH based ịdabere na enweghị mmasị na okike na inwe mmekọahụ.
Gmụaka Gender Dysphoria. 12 usoro vidiyo na transcript.
Mgbagha Mmekọahụ. Usoro ọgwụgwọ Hormone. Nnyocha Mmegharị Mmekọahụ. Ndụmọdụ gbasara mmụọ. A kọwara Transgenderism.
OZI AKWOFKWỌ JOHN WHITEHALL.
Lelee vidiyo ndị ahụ n'asụsụ Bekee ma ọ bụ jiri onye nsụgharị Google na ibe a gụọ ihe ederede na asụsụ gị.
Nne ma ọ bụ nna ọ bụla maara na mgbe ị na-azụlite ụmụ, enwere ọtụtụ mpaghara ebe ọ ga-esi ike ịrụ ọrụ, nwa ọ bụla ga-achọ atụmatụ nlekọta nke onwe ha. Ma anyị niile maara na ọkụ ahụ dị ize ndụ, ya mere anyị na-adọ ụmụaka aka ná ntị banyere ihe ize ndụ dị na ụzọ ha nwere ike isi ghọta ya. Anyị anaghị ekwe ka ha mụta na ọkụ dị ize ndụ site n'ikwe ka ha kpọọ ya. A ga - enwe ihe mgbu na ihe mgbu mgbe ogologo oge gachara ma ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ. N'otu ụzọ ahụ, gịnị mere a ga-eji jụọ anyị ka ụmụ anyị nwee ike itinye aka na mmemme ndị na-agwa ụmụ ha ka ha kwụsị ịtụkwasị obi na ezinụlọ ha maka inye nduzi dị mkpa iji rụọ ọrụ site na nwata, ogo na mmepe ma bụrụ n'okpuru "nkuzi" karia ihe omuma nke imegbu mmadu na ikwenye nke di iche iche. Ma nke a bụ ihe Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Ụlọ Nche gwara anyị ka anyị mee.
Onye otu onye omeiwu Australia Mr. Andrew Haste.
MP Andrew Hastie na-ekwu okwu na mmemme "Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo" na nzuko omeiwu Australia.
Ghọta usoro a na -eme maka ịkọ egwuregwu - chọpụta ihe kpatara mmemme a ji akụzi naanị n ’imechi emechi na enweghị nne na nna ịhọrọ. Ọ bụrụ na nchekwa nke ụmụ anyị bụ ihe ọ bụla dị mkpa, ọ ga-emeghe iji leba anya na itinye aka na ndị niile metụtara maka ịzụlite ndị na-eto eto iji ghọta na anyị bụ mmadụ dị iche iche, hara nhata n'ụzọ niile. Rịọ maka otu usoro ọmụmụ, ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ịchọta ụlọ akwụkwọ dị njikere ịkọwa ọdịnaya ya, dịrị njikere ịghọta oku na-akpọ iji mee ihe anyị setịpụrụ n'ihu gị.
Roz Ward bụ onye na-emepụta Ụlọ Akwụkwọ Nchedo kwuru na Ụlọ Akwụkwọ Nchedo abụghị maka iji ike emegbu mmadụ.
Onye nhazi ụlọ ọrụ "oflọ Akwụkwọ Nchedo" Roz Ward kwetara na Safelọ Akwụkwọ Nchedo abụghị maka iji ike emegbu mmadụ.
Maka ndị ị na-erubeghị njikere ịhapụ ikike gị dịka nne ma ọ bụ nna iji kụziere ma duziere ụmụ gị site na mmalite nke oge ntorobịa na nká, biko jisie ike! Ugbu a bụ oge iji kwado maka iwepụ nke usoro ihe omumu na nkewa.
Otu nne na-ekwu maka ịchọpụta echiche nwoke na nwanyị a na-akuziri nwa ya nwoke n'ụlọ akwụkwọ.
Akụkọ Cella banyere ụmụ ya na Mmemme “Schoolslọ Akwụkwọ Na-adịghị Ahu” n’ụlọ akwụkwọ ha.
Nke a bụ otu ị nwere ike isi mee ka obodo anyị nwee ike ịzụlite ikike siri ike na nsonye:
Na-arụsi ọrụ ike n'ụlọ akwụkwọ gị. Chọpụta ihe mmemme obodo ha nwere ugbu a maka emume ụmụ mmadụ pụrụ iche nke mejupụtara obodo - sonye ma mee ememme ọtụtụ ụlọ akwụkwọ nyere iji kwado ndị otu niile nke ụlọ akwụkwọ ha - ọ bụghị naanị ndị atụmatụ ha nwere ike ịdabere na mmekọahụ njirimara dika ihe ndabere maka idi.
Chọpụta ihe ụlọ akwụkwọ gị na-akụzi na mmemme ha ji akụzi ụmụaka na ndị ntorobịa gbasara nnabata n'ụdị ya niile - gbasara nha anya, ọmịiko, na nghọta nke ụdị dị iche iche. Kwado ulo akwukwo gi site na igwa gi na nghota na SAFE adabaghi ​​na ekpughere nke nwoke.
Weghachi okwu SAFE - hụ na ọ bụghị okwu mkparị maka idozi ụmụaka karịa nghọta ha na ọchịchọ ebumpụta ụwa ịchọ ịmata ihe. Maturemụaka na-eto eto na ọkwa dị iche iche ma mmemme a anaghị ekwe ka nke a. Ọ na-amanye echiche na ime mkpebi na mpaghara dị nro nke ọma tupu ọtụtụ ụmụaka adị njikere ịghọta oke na ogologo ndụ nke nhọrọ ndị a na-eme. Itozu okè na ntozu okè enweghi ike ịmanye ya na usoro iji wepụ ntinye nne na nna mmemme a na-akwado, abụghị usoro ahụike anyị kwesịrị iji nwayọ nọdụ ma nakwere. Kwuo! ma gbaa mbọ hụ na ụlọ akwụkwọ gị maara mkpebi gị.
Ọ bụrụ na ụmụ gị anọbeghị akwụkwọ, chọpụta ihe gbasara ụlọ akwụkwọ dị n'ógbè gị site na ịga leta ha ma rịọ ka ị na-agafe n'oge oge ezumike ma ọ bụ oge n'efu. Hụ otú ụmụ na-esi na-emekọ ihe ma na-ele anya ịnweta nnabata ụmụaka na ndị ọzọ na-eme ihe.
Dee ya na mpaghara gị MP ma ọ bụ Premier ma mee ka ha mara na ị kwadoo nkwado gọọmentị Federal iji wepu usoro a iji kwado usoro mmemme na nke ọma. Maka Nchebe pụtara ihe kariri inwe mmekọahụ ma na-agụnye ịnakwere na Ụdị ya niile. Ihe omume nke na-akwado ezinụlọ ma na-enye ya ohere ịrụ ọrụ n'ịkụziri ọgbọ na-esote ụkpụrụ na nghọta bụ isi nke Ụlọ Akwụkwọ Ụlọ Nche na-achọ ịhapụ ya.
MGBE ị na-votu, jide n'aka na ị maara ihe akwadoro onye ọ bụla na mmemme ha ga-akwado. Were oke nkwekọrịta gị ma zipụ ozi ndị ga-aga ime na ị gaghị anabata iwepụ ikike nke ezinụlọ.
Gọọmentị nwere ike inye anyị ihe anyị chọrọ, ọ bụrụ na anyị agwa ha ya. Ghọta ma mee ememe gị dị ka nne na nna iji duzie nwa gị. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ikwurịta ma ghọta ọrụ gị, chọpụta ma debanye aha na nkwado nkwado ụmụaka na-eme site na mpaghara obodo. Ọ bụghị nhọrọ dị mma ka ụmụ gị nwee ike itinye aka na mmemme nke mechibidoro gị ọnụ ma gbaa ume na nzuzo na "nzuzo" nke ndị a na-akpọ Ụlọ Nche Nchekwa.
Ekwela ka usoro ihe a mee ka ị daa-LEAR IT DOWN!
Nyere anyị aka ịchekwa ụmụ anyị.
Nye onyinye na CAUSE. Bank: NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206